မိထူး မဟာဗျူဟာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » မိထူး မဟာဗျူဟာ
Posted by ムラカミ on Jul 17, 2012 in Business & Economics, Creative Writing, Marketing | 17 comments
မားကတ္တင်း အကြောင်း မရေးဖြစ်တာကြာလို့ နည်းနည်း ရေးကြည့်တာပါ…ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး
သဂျီးက အတင်းမပြောရဘူး ဆိုကာမှ အတင်းပြောချင်စိတ်တွေ ..သိပ်သိပ် ကို များပြားလာပါဘိတောင်း..
သည်တခါပြောမယ့် အတင်းက မိထူး အကြောင်း …ဟုတ်ပါ့.. Me Too Strategy တဲ့ ..
စာသိပ် မလေးအောင် ..အလွယ်ပဲ ရေးတော့မယ်ဗျာ ..အဆိုပါ မိထူး အကြောင်း ..
မိထူး ဘယ်ကစ ..
ဘယ်က စ သလဲပြောရရင် ဘယ်သူက စ သလဲ ပြောမှ ဖြစ်လိမ့်မယ်..။
ဘယ်တော့မှ Market leader တွေ .. Entrepreneur တွေ မိထူး စလုပ်လေ့မရှိဘူး ..။
ဘယ်လိုလူတွေ လုပ်လေ့ရှိသလဲဆို .. leader တွေ နောက်မှာ ရှိတဲ့ သူတွေ …
(အတိုက်အခံ ဆန်ဆန်) တဆင့်နိမ့် ပြိုင်ဘက်တွေ လုပ်လေ့ ရှိသတဲ့ ….။
အဲ..Me Too ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ၂ခု ရှိတတ်သတဲ့ …ပထမ ၁ခုက
ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းအရ … ဟုတ်ကဲ့ .. leader ဖြစ်တဲ့လူက ဒါလုပ်ရင် ..
ကိုယ်ကလည်းပဲ ဒါမျိုး ပုံစံတူ လိုက်လုပ်ပြတယ်.. (မကွာပါဘူးကွာ ..ငါလည်း
သိပါတယ် တတ်ပါတယ် ဆိုပီး appeal လုပ်ပြတာမျိုး..)
အဲ … အဲ့လိုမဟုတ်တဲ့ ..ဒုတိယမြောက် ရည်ရွယ်ချက် ကတော့ market leader
ဖောက်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းကို ကိုယ်လည်း ၀င်ပြီး လျောက်မယ် ..(ငါလည်း စားမယ်)
ဆိုတဲ့အစား ဖြစ်ပါတယ်။ ပြောရရင် Ansoff’s Martrix ကို ပြန်သွားရမယ်..ဗျ…
ဆိုပြီး ၄ဆင့်ရှိပါသတဲ့ …(သိပြီးဖြစ်လည်း သည်းခံနားထောင်ပေးကြပါဗျား..)
ကတော့ .. ရှိပြီးသား ဈေးကွက်ထဲကို ထိုးဖောက်တာ ဖြစ်သတဲ့ …။
ဥပမာပြောပါဆိုရင် …ဆပ်ပြာ လိုပစ္စည်းမျိုး ပေါ့ ..။ လူသားအားလုံး ရေချိုးကြပြီး
ရေချိုးတိုင်း ဆပ်ပြာ တိုက်ကြတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ဆပ်ပြာ နာမည် အသစ် ထုတ်ပြီး …
ရှိပြီးသား ဈေးကွက် ကို ဒါလေး သုံးကြည့်ပါလား ဆိုပြီး ထိုးဖောက်တာ….။
(သိပ်တော့ ရင်ခုန်စရာမကောင်း… ခက်လည်း သိပ်မခက် – ကျန်၃မျိုးနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင်..)
ဒါက ပိုမို နက်နဲတဲ့ ကိစ္စ ဖြစ်လာပါပြီ …။ ရှိပြီးသား ဈေးကွက် ကို ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား သစ်
ထုတ်လုပ် ထိုးဖောက်တာ ဖြစ်ပါတယ်.. ။ ဆပ်ပြာ ဥပမာ ကို ပြန်သွားရင်… (ကိုယ်တိုက်)ဆပ်ပြာ
သပ်သပ် .. ခေါင်းလျှော်(ရှမ်ပူ) သပ်သပ် ရှိနေရာကနေ … အသစ် ထုတ်တဲ့ ထုတ်ကုန်ဟာ ..
ကိုယ်လည်းတိုက်နိုင်သလို ..ခေါင်းလည်းလျှော်နိုင်တာမျိုး ဆိုပါတော့ …
သည်နေရာမှာ Entrepreneurship က စကားပြောလာပြီ ဖြစ်ပါတယ် …
လွန်ခဲ့တဲ့ ၄နှစ်က တွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့ .. product တခု ကို ဥပမာပေးချင်ပါတယ်.. (ဘယ်လောက်
အောင်မြင်သလဲ ဆိုတာတော့ လိုက်တိုင်းမကြည့်ဖူးလို့ မသိပါ)
ဟုတ်ကဲ့ hair dryer ဖြစ်ပါတယ်..။ တသက်လုံးက hair dryer ဆိုရင် လက်တဖက်နဲ့
ကိုင်ပြီး မှုတ် ကျန်တဖက်နဲ့ ဆံပင်ကို ပွတ် .. ဆိုတဲ့ အယူအဆ ဟောင်းကနေ ..လက်၂ဖက်လုံး
အလွတ်ထားပြီး ဆံပင်ကို စိတ်ကြိုက်ပွတ်လို့ ရမယ့် ..ထောင်ထားလို့ …(၀ါ) ချိတ်ထားလို့ရမယ့်
hair dryer အမျိုးအစား ကို ဖန်တီးကြတာပါပဲ …။ ပြောရရင် ..ရှိပြီးသား ဈေးကွက်ထဲကိုပဲ
အသွင်မတူတဲ့ ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားသစ် ဖန်တီးရတာမို့ …1. ထက်တော့ ပိုမို ပညာပါ ..
နက်နဲတာ အမှန်ပါ …။ (Mirrorless Camera တွေဟာ ဒါမျိုး လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်… ဓာတ်ပုံ
၀ါသနာကြီးသူတွေကို compact တွေ ရဲ့ ကျစ်လစ်မှု ဂုဏ် နဲ့ ..DSLR တွေရဲ့ interchangable
lens ဆိုတဲ့ features ကို ပေါင်းစပ် ထုတ်လုပ်ထားတာပါ..)
ဒါကတော့ ဈေးကွက် အသစ် ရှာတာ ဖြစ်ပါတယ်..ပစ္စည်းဟောင်းနဲ့ဆိုပါတော့ …
ဒါကို ပိုမို ခက်ခဲတယ် လို့ ပြောရတာ အကြောင်း တွေရှိပါတယ်…။ DIY တွေဟာ
သည်ဘက်မှာ အကျုံးဝင်တယ် ဆိုနိုင်ပါတယ်…။ စာအုပ် ထဲက ဥပမာ အတိုင်းပြောရရင်တော့…
အနောက်တိုင်းမှာ ဟိုး ရှေးရှေးက အိမ်ရှင်မတွေဟာ ဂျုံတွေဝယ်ပြီး အိမ်တွင်းဖြစ် ကွတ်ကီးတွေ
ဖုတ် ပါသတဲ့ ..။ ခေတ်တွေပြောင်းလာတဲ့နောက် .. မုန့်ဖုတ် ကန်ပနီတွေဟာ ကွတ်ကီးတွေ ပေါများစွာ
ထုတ်လုပ်ရောင်းချလာခဲ့ပါတယ်..ပြောင်းလဲလာတဲ့ လူမှု ပုံစံအရ …convenience store တွေ super market
တွေက နေ အလွယ်တကူ ၀ယ်ယူရရှိလာလို့ အိမ်ရှင်မတွေဟာ အချိန်ကုန်တဲ့ အိမ်တွင်းမုန့်ဖုတ်တဲ့
အလုပ်ကို ဆက်မလုပ်ကြတော့တာမို့ ဂျုံထုတ်လုပ်သူတွေဟာ …မုန့်ဖုတ်တဲ့ ကန်ပနီတွေ
ကလွဲရင် end user တွေထိ တိုက်ရိုက် ထိတွေ့ဆက်ဆံ ဖို့ မရှိတော့ သလောက်ဖြစ်လာပါတယ်..
သည်အချိန်မှာ ဂျုံထုပ်လုပ်သူတွေဟာ .. market development တခု လုပ်ခဲ့ပါတယ်…
အဲ့ဒါကတော့ အဆိုပါဂျုံစိမ်းတွေဟာ ..ရေခဲသေတ္တာ သန့်ရှင်းရေး အတွက် အလွန်အသုံးကျတယ်
ဆိုတာပါပဲ …ပြောရရင် ရှိပြီးသား ကုန်ပစ္စည်း တခုရဲ့ new usage ကို ရှာတွေ့ တာပါ …new usage of
old product ဖြစ်ပါတယ်..။ သည်လိုနဲ့ အိမ်တွေရဲ့ မီးဖိုချောင်မှာ ဂျုံမှုန့်တွေ တဖန်ပြန်လည် နေရာယူလာခဲ့တယ်
ဆိုနိုင်ပါတယ်… (မူလဘူတ ရည်ရွယ်ရင်း မုန့်ဖုတ်ဖို့ မဟုတ်ပါ) .. ဒါဟာ အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ ..ရေခဲသေတ္တာဆေး
ဆပ်ပြာရည် အမျိုးအစား တွေ ပေါ်မလာခင်ထိ အလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းဝင်ဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်..။ အလားတူ
ဖြစ်ရပ် တခု ဆွဲထုတ်ရရင်တော့ .. ကြက်သွန်နီနဲ့ ပေါင်မုန့်ကြမ်း ကို ဖုန်အလိပ်လိပ်တက်နေတဲ့
ဆီဆေးပန်းချီကားတွေ သန့်စင်ဖို့ သုံးလို့ ရတာပါပဲ … အဲ. ..ခင်လို့ လက်တို့ရရင် microwave မီးဖို အတွင်းပိုင်း
ကို ဆေးချင်ရင်တော့ ..ဘီယာ နဲ့ ရေမြှုပ်ဖော့ ဟာ အလွန် အသုံးဝင်ပါကြောင်း …
အချုပ်ပြောရရင် 1 & 2. ထက် ပိုမို ပညာပါ လက်ဝင်ပြီး နက်နဲတဲ့ သဘောတရားတွေ ပါဝင်လို့ပါ…
အခက်ဆုံးတော့ မဟုတ်သေးပါ …. အခက်ဆုံးက အောက်မှာ စပြောပါမယ်..
ဖြစ်ပါတယ်… ဒါကတော့ …ပစ္စည်းသစ် ကို ဈေးကွက်သစ် ဆီ တင်ပို့ရောင်းချတဲ့ ကိစ္စရပ် လို့
ဆိုချင်ပါတယ်… ။ ဈေးကွက် ဆိုလို့ …မျက်စိထဲ ဘာပြေးမြင်မလဲ ..မေးချင်မိပါရဲ့ …။
ဈေးကွက် market ဆိုတာ ..cluster of customer ဖြစ်ပါတယ်… စားသုံးသူ အစုအဝေးပါ..
ရုပ်သဘောအရ ဈေး တခု လို့ မြင်မယ်ဆိုရင် ..နည်းနည်း lost in translation ဖြစ်မယ် ထင်ပါကြောင်း..
(ဟုတ်ကဲ့ ကျနော်တို့ lost in translation ဖြစ်ခဲ့တာခပ်များများပါ…သည်နေရာမှာ သုံးတဲ့ market
ဆိုတာ .. market <> ဈေး ..ဆိုတာလေး ပြောချင်လို့ပါ..)
သူတို့ သုံးတဲ့ ..မိထူး
ဆက်ရရင် ဈေးကွက် အသစ် ကို ပစ္စည်းအသစ် ချပြတာမျိုး… အနီးဆုံး ဥပမာ ကတော့
iPad ပါပဲ …။ အရင်က ကွန်ပျူတာ ဆိုရင် desktop သုံးတယ် ..နောက် portable ဖြစ်တဲ့ laptop
အဲ.. ဖုန်းမှာလည်း အရင် က mobile phone သုံးရာကနေ .. smart phone ပြောင်းသုံးတယ်..
သည်တော့ .. smart phone နဲ့ laptop ကြားက gap ကို ကျကျနန define လုပ်သွားပြီး
tablet PC ဆိုတဲ့ ခေတ်ကို ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့လို့… ဒါကို diversification အဖြစ် သတ်မှတ်မိပါတယ်
(ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်) ကိုယ်ပိုင် အယူအဆ အရ ဆိုရင် အခု သိပ် ဟော့နေတဲ့ ultrabook ကို
Product Development လို့ပဲမြင်ပါတယ်… revolusionary သိပ် မဖြစ်လှပါ…။သည်တော့
ပစ္စည်းအသစ် ကို ဈေးကွက်အသစ်ကို debut လုပ်ရတာ သိပ်ခက်ကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်..
အဆိုပါ 1.2.3.4 ၄ခုမှာ ခက်ခဲမှု ..မရေရာမှု အဆဟာ 4x ရှိတယ် လို့ ပြောစမှတ်ရှိပါတယ်..။
1. Market Penetration 1x
2. Product Development 4x
3. Market Development 8x
4. Diversification 16x
1. Market Penetration ဟာ အဆ အားဖြင့် ၁ဆ လောက်ခက်တယ် ဆိုရင်
4. Diversification ဟာ သူ့ ၁၆ဆ ခက်တယ် လို့ ပြောစမှတ်ရှိတာပါ…။
ခေါင်းစဉ်ပါ အကြောင်းအရာ ကို ပြန်ကောက်ရရင်တော့ …အဲ့သည့်မှာ မိထူး Me Too တွေ
နေရာယူတော့သကိုးဗျာ.. ငါလည်း လုပ်မယ် ဆိုတဲ့ ၀ါဒ ဗျ…
မှန်သလား မှားသလား ဆိုတာထက် .. သူများ စားရရင် ကိုယ်လည်း လိုက်စားရချင်တဲ့
လူ့သဘော လူ့ မနော ကို အခြေခံတယ် လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်…။
ဘာ့ကြောင့် မိထူး ???
သိပ်မခက်ခဲတဲ့ …1. Market Penetration ထက်စာရင်…
မှာ အတွေ့ရများတယ် လို့ ဆိုချင်ပါတယ်…
သည် ကန်ပနီတွေ…ဟာ 4. Diversification ကိုတော့ သိပ် လုပ်လေ့မရှိကြပါ…
(စလုပ်ရမှာ ..သိပ်ခက်ခဲသလို .. market leader တွေ ဖောက်တဲ့လမ်း လိုက်လျောက်လေ့ရှိတယ်လို့
4. Diversification အကြောင်းကိုတော့ နောက် ကြုံမှ ပဲ အသေးစိတ်ရေးပါတော့မယ်..
(follower တွေ ဘက် က လုပ်လေ့ ရှိတဲ့ flank attack တွေ guerrilla marketing တွေဘက်
ဆိုတော့ ..ဆက်ရရင် … သည်လို လိုက်လုပ်လေ့ရှိတဲ့အထဲ ထင်ရှားတဲ့ ကန်ပနီရှိရင် ပြပါ ဆို
Samsung ကို ပြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်..။ Sharp က 3D TV ထုတ်တယ်.. လိုက်ထုတ်တယ်..
Sony က Bluray ဆိုပြီး လုပ်တယ် ..လိုက်လုပ်တယ် .. Toshiba က standard ချပြတဲ့ HD(Media format
အနေနဲ့မှာ Bluray ကိုရှုံးခဲ့ပြီး resolution standard အနေနဲ့ ရပ်တည်ခဲ့သူ) အတိုင်း လိုက်လုပ်တယ်..
အခုနောက်ဆုံး ..Apple ရဲ့ iPhone & iPad ကို လိုက်လံ တုပပြီးထုတ်တယ်…
တုပ ရုံတင် မကဘဲ ..၀ါးမျိုဖို့အတွက် ..အရွယ်အစား အမျိုးအစား တွေ ခွဲပြီး
( ဈေးကွက်နဲ့ ထုတ်ကုန် ကို diversify မလုပ်နိုင်(ရ) တော့ …features ကို diversify လုပ်ပြီး
ဈေးကွက်ကို segment ခွဲ ကာ positioning လုပ်တာ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်..)
မိထူး ဟာ နောက်ဆုံးမှာတော့ ရှုံးတတ်တဲ့ မဟာဗျူဟာ အဖြစ်
အတော်များများက ကျယ်ကျယ်ပျံ့ပျံ့ လက်ခံထားကြပါတယ်…
သည်လိုပြောလို့ .. လက်တလော Samsung ရဲ့ performance ကိုကြည့်ပြီး
ဟုတ်မှလည်း လုပ်ပါ ကွာ ..လို့ အပြော မစောစေချင်ပါ …စောင့်ကြည့်ပါဦးလို့
ဖြေပါရစေ …။ အဲ့ဒါတွေက စာအုပ်တွေထဲမှာပဲ ရှိတာပါ ..ဆိုတဲ့ လူတချို့အတွက်တော့..
အဲ့သည့် စာအုပ်တွေက အင်္ဂါဂြိုလ် ပေါ်မှာ ဖြစ်နေတာတွေကို ရေးထားတာ မဟုတ်သလို
အဲ့သလောက် လွဲမှတော့ …ဘယ်သူမှ ရှာဖတ် စောင့်ဖတ် သင်ယူ နေမှာ မဟုတ်တာလေး
လက်တို့ချင်ပါတယ်..။ မိထူး ..မဟာဗျူဟာ အမြဲ ရှုံးတယ် ဆိုတာဟာ branding issues
နဲ့ နက်နက်ရှိုင်း ရှိုင်း ..ပါတ်သတ်နေပါတယ်.. . Chasm ကို ဖြတ်ပြီးသား model
မို့ အရှုံးမရှိဘူး လို့ ..ပြောသူတွေလည်း မရှားပါ …။ သည်နေ့ခေတ် ဘောလုံး စကားနဲ့ပြောရရင်
ကောင်းရှုံး ဆိုတာ မရှိပါဘူး.. ရှုံးတယ် ဆိုကတည်းက တခုခု လိုလို့ (မကောင်းလို့) ပါပဲ …
result – point of view ဖြစ်နေရင်တယ် လို့တော့ မဝေဖန်ချင်ပါ …။ Business မှာ ဒါဟာ
အမှန်တရား ဖြစ်ပါတယ်… Samsung ရဲ့ ခြေ အနှုတ်အသိမ်း ကို စောင့်ကြည့်ပါဦးမယ်..
Creative Destruction ကို တွန်းအားပေးတဲ့
Driving Forces တွေထဲမှာ Me Too လည်း ပါကြောင်း …
သုံးသပ်မိရင်း …အဆင်ပြေတဲ့အခါ …အဲ့သည့်ဘက် အကြောင်း
အင်း ဈေးကွက်ကတော့ တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာ မတူကြဘူးပေါ့နော်။ မသိတာတွေလည်း သိရတယ်။ ဒီမှာက ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့သွားနေကြသလားဆိုတာ လေ့လာကြည့်ပါဦးမယ်။
ပုံစံကွဲ ၂မျိုး နဲ့ သွားနေတာ….
ပထမ ၁မျိုးက monopoly
နောက် တမျိုးက me too အလုပ်လွန် လွန်းပြီး red ocean
(နာမည်တွေပြောင်းလွန်းလို့ လိုက်မှတ်ရတာ ဆယ့်နှစ်မျိုး ဂျင်းသုတ်ဖြစ်နေပြီ)
နှလုံးသား ရှိတဲ့အရပ်ကို သွားရလို့ထင်တယ် စိတ်ကောင်းဝင်ပြီး စာပြန်ရေးတင်တာ ဂွတ်ရှယ်ပဲ။
ဒါမိုးစာတွေ များများရေးပေးပါ။ [:))]
လောလောဆယ် red ocean strategy ကို အလွန်မုန်းတီးနေပါတယ်။
ကောင်းရှုံး မရှိဘူး ။ တခုခုလိုလို့ မကောင်းလို့ ဆိုတာကြီးကို ကိုယ်တွေ့ ကြုံဖူးတယ်။
Product Development ကို သေလုမျောပါး လုံးပန်းနေတာမို့
Market Development ဆိုတာသိသော်လည်းပဲ ခေါင်းတောင် ထောင်မကြည့်နိုင်သေးတဲ့ ဘ၀မှာပဲ ရှိနေပါတယ်။
စကားစပ်လို့ လျှောက်ပြောရရင် ရေခဲသေတ္တာကို ဘီယာနဲ့ ရေမြှုပ်နဲ့ ဆေးရင်ရတယ် ဆိုတာ ခုမှ သိတယ်။
အိမ်မှာတော့ မီးသွေးခဲတခုကို အနံ့စုပ်တယ်ဆိုပြီး ထည့်ထားတာကြာပါပြီ။ နည်းနည်းကြာရင် ပြန်ပြန်လဲရတာပေါ့။ ဆေးရင်တော့ ဗီနီဂါရည်ကို ရေမြှုပ်နဲ့ ဆေးပါတယ်။ အနံ့လည်း ပျောက်ပြီး သန့်တယ်။
ခုတလော စိတ်ရော လူရော ပုံမှန် အခြေနေမှာ ရှိနေတာ သိရတဲ့ အတွက် ၀မ်းသာပါကြောင်း။
ပြောလိုက်မှ ထဖောက်မှာလည်း စိုးရတယ်။
မိုက်ခလို ဝေ့ဗ် ပါဆို ..
အဲ …ဆေးလို့တော့ ရသဗျှ …နည်းနည်းတော့ ညှီမယ်..
မိုက်ခလိုဝေ့ဗ်က အပူပေး အခြောက်ခံ ( တလွဲမတွေးရ) ရင် ဘီဘီ နံ့ပျောက်တယ်လေ…
ရေခဲသေတ္တာက စိုစိစိုစိ ဆိုတော့ …ဘီဘီနဲ့များ ဆေးရင် ညှီတယ်အေ့…
ဘောက်မယ့်ကြောင့် …ခုချိန်မှ လူရော စိတ်ရော ပုံမှန်ရှိရသတုန်း …
မသိရင် သများကပဲ ရူးနေတာ ကျနေတာပဲ…
စကားမစပ် ..ဟိုတလောကပြောတဲ့ကိစ္စ …နောက်တပါတ် ထပ်ရွှေ့ပါကြောင်း…
နောက်တပါတ် ကတော့ သေဂျာ ပါဂျောင်း …
ဘာလို့လဲဆို နောက်တပါတ် ကနေ နောက်ထပ် ၁ပါတ် ရွှေ့လို့ မရတော့လို့ ဖြစ်ပါဂျောင်း..
လကုန်ရက် မှာ ဧည့်သည်လာဖို့ ရှိလို့ပါ အေ…
အဲလို ဘီဘီနဲ့ ဆေးဖို့လုပ်တာကို ဘီဘီက ဆေးမဲ့ မိုက်ခရိုဝေ့ ဆီမရောက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်..ဂေ့..အေ့အေ့..။
လေးစားရပါသော ကိုအစိုင်အခဲမြွေ ခင်ဗျား….
မပန်ပန်ရဲ့ ပို့စ်မှာ My Commnet ကို ကျေးဇူးစကားဆိုပေးထားတာ တုန့်ပြန်ပြောစရာစကားရှာမရလို့
(ရိုးရိုးကြီးပြန်ပြောရမှာနဲ့၊ရိုးရိုး အလာပသလာပဆို နှုတ်မရဲလို့ရယ်၊ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြောတာနော်၊)
ဒီမှာ လျှာ လာရှည်ကြည့်မလို့။
ရပါတယ်နော် ? (ဪ ဟုတ်ကဲ့ ရပါတယ် လို့ဖြေမှာပါ)
အခုဟာတွေကို မားကက်တင်း စထွာတက်ဂျီ (Marketing strategy) မဟာဗျူဟာလို့ပြောမှာလား။
တတ်တစ် (Tactic) နည်းဗျူဟာလို့ လဲ သုံးနိုင်မယ်လား၊မှာလား၊ရလား။
အိုခေ ..ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် စထရာတက်ဂျီလို့ ယူမယ်နော်။
မားကက်တင်းစထွာတက်ဂျီ တခုဟာ entrepreneur အွန်ထရာပရယ်နားဘဲဖြစ်ဖြစ် မီထူးဘဲ ဖြစ်ဖြစ်
Org Objectives အော်ရီဂျင်နယ် အာ့ဗ်ဂျက်တစ်ဗ် က ” အစ ” လို့ ဆိုရမှာပါ။
အဲဒီ ရည်မှန်းချက် =အာ့ဗ်ဂျက်တစ်ဗ် ကို ကိုယ်တတ်နိုင်ရာအင်အား = ရီဆို့တ် Resources
တခုနဲ့ fit ဖစ်တ် ဖြစ်အောင်
လုပ်တဲ့ စထွာတက်ဂျီ ဖစ်တ် Strategic Fit ဆိုတာစဉ်းစားရပါတယ် ဆိုလားဘဲ။
အဲဒီ စထွာတက်ဂျီ ဖစ်တ် = မဟာဗျူဟာ အနေတော်ဖြစ်စဉ်လေးကို ပုံသေမသတ်မှတ်ပြန်ပါဘူးတဲ့။
သူ့ကို အဲဒီ ပြောင်းလဲပါတ်ဝန်းကျင်Changing Environment
အရ အပြောင်းအလဲ လုပ်ပေးရပြန်ပါတယ်ဆိုလားဘဲ။
အာ့ဗ်ဂျက်တစ်ဗ် ကိုတော့ ပုံသေထားလို့ ရပေမဲ့ (ထားကိုထားရပေမဲ့)
ကိုယ်က ဒုတိယလူဆိုရင်(ပို့စ်ထဲကဆို ဆမ်ဆောင်းပေါ့နော)
ပထမအွန်ထရာ ပရယ်နား =စွန့်ဦးသမားလောက်”အင်အား” ရှိမရှိချိန်ပြီး၊ မီထူးတော့မယ်ဆိုရင်
(the way of catching-up) ဘယ်လိုလိုက်တဲ့အကွက် ကို ရွေးမှာလဲ (အကုန်လား၊ တခု နှစ်ခုလား) ဆိုတာ
“ရွေးရတဲ့ ဒီဇစ်ရှင်မိတ်ကင်း” Decision making ကိုအသက်လို့ထင်မိတယ်လေ။။
ပြောရရင် Plan B ပလဲန်ဘီ ဆိုတာတောင်မရှိဘူးနော်။
အဲဒီနေရာက ဖစ်တ် ဖြစ်တာကိုရွေးပြီးပြီ ဆိုတာနဲ့ ဆုံးအောင် လျှောက်ပေတော့ဘဲ နော့။
ဆိုတော့ သူလဲ အသေဘဲ။ ပုံသေတခုကိုရွေးရတာကိုး။ဘာကိုထုတ်မလဲဆိုတာ အဲဒီအဆင့်မှာပေါ့နော်။
ဒါနဲ့ နောက်ဆုံးတော့ ဘယ်လောက်ထုတ်မှာလဲ၊ဘယ်သူတွေအတွက်လဲ၊ ဘယ်မှာထုတ်မလဲ၊ဘယ်အချိန်ထုတ်မှာလဲ
ဆိုတဲ့ ဟာတွေကျတော့ ပုံသေဟုတ်တော့ဘူးရယ်။
Sony ဆိုနီလို ဘီလူးကြီးကိုတောင် “ရစ်”ထည့်လိုက်တဲ့ ဥရောပဈေးကွက်ကို ဖောက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
ဈေးပေါရင်ဝယ်တယ်၊လှရင်ဝယ်တယ်၊ဆိုတဲ့ အာရှသားတွေအတွက်ကကော ဘယ်လို အပြောင်းအလဲ လည်းဆို
(ရည်မှန်းချက်)အာ့ဗ်ဂျက်တစ်ဗ် ———စထွာတက်ဂျီ ဖစ်တ် —->> ရီဆို့တ်(အင်အား) ….လို့ဆိုပြီး။
စထွာတက်ဂျီ ဖစ်တ် (မဟာဗျူဟာ အနေတော်ဖြစ်ရေး) <<————-ပြောင်းလဲပါတ်ဝန်းကျင် … လို့ဆိုရပေမယ်။
ဆိုတော့ ဒိုင်ဗာစိဖိုင်းလုပ် ဆိုရင်အဲဒီ အပြောင်းအလဲ လှိုင်းလုံးက အကြီးကြီး ဖြစ်သွားလို့
၁၆ ဆ တက်သွားတယ် လို့ ပြောမယ်။(ဇွတ်)။
entrepreneur အွန်ထရာပရယ်နားကိုစွန့်ဦးတည်ထွင်လုပ်ငန်းရှင်လို့ ဆိုတော့
မီထူးဆရာတွေကိုလည်း catcherpreneur လိုက်စွန့်တည်ထွင်လုပ်ငန်းရှင်လို့ နာမည်ပေးချင်တယ်။
အနှီ ကတ်ခ်ျအန်ထွာပရက်ညာ ပေါ့ ဆြာရယ်…
အစက တိုက်ကြီး-၅တိုက် နိုင်ငံပေါင်း ၁၀ခုကျော် မှာ
ပန်းသီးနဲ့ ရန်ဖြစ်တဲ့ ပေးတင့်န် အစ်ရှူးဘက်ကရေးမလား
တွေးထားတာ … နောက်မှ ခြုံပဲရေးပါတော့မယ်လေ..ဆို
ပီး သည်ဘက်က ရေးဖြစ်သွားတာ … သဂျီးကလည်း သူများ
အတင်း မပြောရ၀ူးပြောထားတယ်မလား …
Competitive Edge ရောက်တော့ ရောက်လာပါရဲ့ …
Price War ဖြစ်လာရင်တော့ ၀ယ်သူစိတ်ကြိုက်ပေါ့ …
ဖြစ်မလာတဲ့အပြင် Research, Marketing ဒါတွေအပြင်
အခု Legal Cost ကိုပါ ၀ယ်သူကထမ်းရမယ့် ပုံဖြစ်ဖြစ်လာတော့
ဘယ့်နှယ့်ဗျာ ..ကမ္ဘာတန်း သည်အဆင့် ကန်ပနီတွေမှာ …
ပန်းသီးနိုင်စေ ကကြီး ရှုံးစေ လို့ပြတ်သားစွာ ဘယ်အစိုးရမှတော့…
လုပ်မှာမဟုတ် ..ဘယ်အပိုင်း ဘယ်သူနိုင်စေ ဘယ်အပိုင်း ဘယ်သူ သာစေ
လို့ပဲ ရှဉ့်ရောပျားပါ အလှမပျက်ချွေးမထွက်အောင် ၄၀-၆၀ လည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်
၅၀-၅၀ လည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်.. ဆုံးဖြတ်ပေးမယ့် အထာဆိုတော့ရယ်…
ရုပ်ရှင်ရိုက်စားရင်း …တိုရစ်ဇင် သာမက ဈေးပါ လှလှပပ ရောင်းတတ်တဲ့ ကကြီးတွေများပြောပါတယ်..
Letter	Meaning	Class
S	Supersmart	High-end devices
R	Royal	High-end devices
W	Wonder	Mid-Range devices
M	Magical	Low-end devices
Y	Young	Meant for young users
ဟောသည့် လိုင်းအပ် ကြီး ကြည့်ကြည့်ပြီး … မိထူး ဒိုင်ဗာစဖိုင်း (ဒါမှမဟုတ်) မိထူး ဒစ်ဖရန်ရှီအေးရှင်း
(၀ါ) မိထူး ဆဂ္ဂမန် တေးရှင်း ကို မြင်ရသလား လို့ရယ်…
သို့ပေသိပေါ့ဗျာ .. မနော့ပလီ ကစားတာလည်း မကောင်းသို ..သူရို့ဟာသူရို့ မိထူး ကြရင်းနဲ့ …
ဒါတွေအကုန် ပန်းသီး ပိတ်သတ် ပဲဖြစ်ဖြစ် ..ကကြီး ပိတ်သတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်
တခုခုရဲ့ ၀ယ်သူက မသိလိုက်မသိဘာသာ ခံရမယ့် သဘောတွေ့နေရတယ်ဗျို့ …
(ရင်ထဲမကောင်းတော့)…သူ့ဟာသူ Titan တွေ Clash တာ …ဘယ့်နှယ့် အိပ်ထဲက ကြေးပြားလေးတွေ
နောက်ဆုံးတော့လည်း … တိုင်တန်တွေ သတ်တာ ထိုင်ကြည့်ရင်း
၂ဖက်စလုံးကို အိုင်စီ (ဘန်မဟုတ်ပါ) လေးဒွေ ချစ်(ပန်ပန် မဟုတ်ပါ) လေးဒွေ
ထုတ်ေ၇ာင်းစားနေတဲ့ စိန့်တိုင်းက ငလက်မလေးတွေ ထွားထွား လာလိုက်တာများ …
နီယို တိုင်တန် ဖြစ်တော့မယ်….
ပိတ်သတ်တွေလည်း .. လျှာထွက်နေပါဘီဗျာ…
အူးလေး ကို သများ သိသလိုပဲ…
ရေးထားတဲ့သူရော မန့်တဲ့သူတွေပါ ကျနော်တို့ မသိတဲ့ ပညာရပ်ဆိုင်ရာတွေကို ချပြသွားလို့ တကယ်ကို စိတ်ဝင်တစားနဲ့ လေ့လာဖတ်ရှုသွားပါတယ် ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးဖို့ အတွက်တော့
ကျနော့် အနေနဲ့ မစွမ်းပါ။ဒီပညာရပ်မျိုးကလဲ ခုချက်ခြင်း စာထဖတ်ပီး ၀င်ပြောမရတော့ နားလည်
သလောက်ဘဲ ၀င်ပွားလိုက်တာပါ …
ကိုမြွေခြောက်ရဲ့ ရှင်းလင်းမှုတွေက အရမ်းကိုကောင်းတယ်ဗျာ ဒါပေမဲ့ ဥပမာပေးစရာရှားလို့ ပန်းသီးနဲ့ ကကြီးကို ပေးရသလားဗျာ သတ်ပွဲတွေတော့ မြင်ယောင်မိပါတယ်..
ဂနေ့ ဂဘာကျော် ထုတ်ကုန် ပန်းသီးနဲ့ ထုတ်လုပ်သူ လုပ်ငန်းစု မုန့်လက်ဆောင်း တို့ရဲ့ မျက်နှာပြင်ကို နောက်ကွယ်ကနေ ပြုလုပ်ပေးနေသူ CHIMEI ကိုရောဖြင့် ခုနအပေါ်မှ ဖော်ပြထားတဲ့ အဆင့်၎ဆင့်မှာ ဘယ်အဆင့် သတ်မှတ်နိူင်လဲ ဆိုတာလေး ရှင်းပြပေးပါ အမှန်တကယ် သိချင်ပါတယ် နည်းဗျူဟာတွေ မဟာဗျူဟာတွေနဲ့ အပြိုင် ဘေးက ကပ်လိုက်နေတဲ့ ခပ်ပါးပါး အရာလေးတခု အကြောင်း နောက်ဆက်တွဲလေး ရှင်းပေးပါဗျ
CHIMEI က OEM(original equipment manufacturer) ဗျ..
ပန်းသီးတို့ မုန့်လက်ဆောင်းတို့က ..တိုက်ဆောက်ရောင်းတယ်ပေါ့…
သူတို့ဟာ သူတို့ မြေဈေး အိမ်ဈေး ၀ယ်သူ(ဈေးကွက်) ဘယ်တွေမှာ
ဘယ်လိုသတ်သတ် ဘိလပ်မြေရောင်းစားသူနဲ့ တူတဲ့ CHIMEI ကတော့
အေးဆေးမှ အေးဆေး.. သူပူရတာ R&D ဘက် .. အဲ့ဘက်မှာ Edge
မရောက်ရင်တော့ .. အားလုံးက သူ့ကို တာ့တာပြသွားမှာ …
တကယ်တော့ ပန်းသီး ပြန်ထောင်တက်လာတာ ..Device ကြောင့် လို့ ပြောတာထက်
ကနဦးမှာ iTunes ကြောင့် နောက်ပိုင်းမှာ App Store ကြောင့် လို့ ပြောရမယ် ထင်တယ်..
ကနဦး iPod ဟာ တကယ်တော့ mp3 player သက်သက်ပါပဲ ..။ အဲသည့်ကာလ
မြောက်များလှစွာသော Java firmware တွေနဲ့ အခြေခံထုတ်တဲ့ mp3 တွေ ထက်
တခုလေးပဲ သာသွားတာ ..အဲ့ဒါကတော့ iTunes ပါ.. အွန်လိုင်းအခြေပြုပြီး
ကမ္ဘာပေါ်က သန်းနဲ့ချီတဲ့ သီချင်းတွေ စုထားတဲ့ music database ကြီးကနေ ကိုယ်နှစ်သက်ရာ
တရားဝင် ရွေးချယ် ၀ယ်ယူနိုင်မယ့် တခုတည်းသော နည်းလမ်း …။
နောက်ပိုင်း စမတ်တွေ ဖုန်းကြတဲ့ခေတ် ကိုရောက်လာတယ်… အဲသည်မှာ
Rumors are true, your iPod can finally be talked… (စာလုံးလွဲနိုင်ပါတယ်)
ဆိုပြီး iPhone ဆိုပြီး လုပ်ချ လိုက်ပါတယ် … အဲ့သည်မှာ iPhone ကို ဆွဲခေါ်သွားတာက
Apps Store ပါ…။ နောက်ဆုံး SmartPhone နဲ့ Laptop ကြားက တတိယ အရာ
အဖြစ် iPad ကိုပွဲထုတ်တော့လည်း Apps Store ကပဲ လက်တွဲခေါ်ခဲ့တာပါ..။
ဆိုတော့ ..ပြောရရင် ပန်းသီးလည်း ..မီထူး ခဲ့တာပဲ လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်..ဒါပေမယ့်
သူထပ်ပေါင်းထည့်တဲ့ value-added က သူ့ကို competitive edge
ရစေခဲ့တာပါ…။ ပန်းသီးဟာ customer survey မလုပ်သလောက် customer relationship
ကောင်းလွန်းတဲ့ ..(အစွန်း၂ဖက်လုံး နင်းထားတဲ့ အရာပါ)
မုန့်လက်ဆောင်း(နဲ့ အခြား) ကိုပြောရရင်တော့ …ပန်းသီးလုပ်တဲ့အတိုင်း လိုက်လုပ်ချရင်း..
မိထူး ဗျူဟာ ခင်းပါတော့တယ်…။ ပလက်ဖောင်း အသစ်တခု ကို ချပြတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ..
user ကိုပဲ segment ခွဲသွားတဲ့အနေနဲ့ product ကို အမျိုးအစား အမျိုးမျိုးခွဲထုတ်ပစ် လိုက်တာပါ..
ပန်းသီးဟာ သူ့ လိုင်းပေါ်မှာ သူ focus လုပ်ပြီး သွားနေတယ် လို့ မြင်မိပြီး
မုန့်လက်ဆောင်း ကတော့ သူ့ ထုတ်ကုန်တွေကို differentiation လုပ်ပြီး သွားနေတယ် မြင်မိပါတယ်..
ပန်းသီးမှ ပန်းသီး ဆိုပီး သူများ လိုက်တိုက်ခိုက်တတ်တဲ့ evangelist တွေကို သဘောမတွေ့မိပေမယ့်..
အရှိအတိုင်း သုံးသပ်ရရင်တော့ ..ပန်းသီးပလက်ဖောင်း အကောင်မကိုက်သလောက် နည်းတာ
brand နဲ့ အများကြီး သက်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်… (အထင်) .. ဖွင့်မရတဲ့ သော့ခလောက်ဆိုတာ မရှိစကောင်း
မို့ …နည်းပညာဆိုတာထက် ..ကိုယ်မြတ်နိုးတဲ့အရာ ကို ကိုယ်မဖျက်ဆီးဘူးဆိုတဲ့ Branding နဲ့
ဆေးကျောထားတဲ့ Psycho အရ ..ထိန်းထားနိုင်တယ် မြင်ပါတယ်…။ မုန့်လက်ဆောင်း ဟာ
ပြိုင်ဘက်ကောင်းပါ .. ။ သူနောက်ထပ် ကြုံရမယ့် အတားအဆီးကတော့ Apps Gap ကိစ္စပါ..
စက်ရုပ် မောင်းနှင်မှုကို သူ ဘယ်လို ဘယ်လောက် optimized လုပ် customized လုပ်ထားသလဲ
ဆိုတာကို မူတည်ပြီး ..ဟို အပ္ပလီ support ပေးတာ မပေးတာ ..သည် tools သုံးလို့ရတာ မရတာ..
တွေဟာ customized လုပ်ထားတဲ့ ဘယ်စက်ရုပ်ပစ္စည်းမဆို ကြုံရမယ့် ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်…။
(ကုန်ကုန်ပြောလို့ …အမြစ်တူးချင်ရင်တောင် တူးနည်း က တပုံတပင် ဒီဗိုက်စ် မတူရင်
အရင်က ပြောဖူးတဲ့ သူငယ်ချင်း ၃ယောက် ရှိလေသည် ဇာတ်လမ်းအရ …
နောက်လာမယ့် သူငယ်ချင်းကတော့ .. ၀ိတ်နဲ့ဖိမယ့် အပျော့ ဖြစ်ပါတယ်…သူက
လက်ချောင်းတွေများသလို လက်တံလည်း ရှည်ပါတယ်..သူ့ ပြတင်းတံခါး-၈ သာ
အင်ဒတ်စတွီရယ် နံပါတ်-၁ ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်… သူ့ ပါတနာတွေ စင်ပေါ်ပြန်ရောက်လာဦးမှာပါ…
အဲ့ သည်အခါ ..မုန့်လက်ဆောင်းဟာ အများထဲက တယောက် ပဲဖြစ်သွားမလား ..
သူကိုယ်တိုင်ရော … အပျော့နဲ့မောင်းတဲ့ ထုတ်ကုန်လိုင်းသစ် စတင်မလား ..သိချင်သားဗျာ..
(ဒုတိယဟာ ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်… ပြောပါတယ် …မိထူးပါဆို..)
ကိုဗစ်ထရီပြောတဲ့ စထွက်တဂျီဖစ်ကို ကျွန်တော်နားလည်သလိုပြန်ပြောရရင် အစ်ကိုရယ်…
ပန်းသီးက iPod Touch ကိုထုတ်တယ်… iPhone လောက်ဈေးမကြီးပဲနဲ့ အိုင်ဖုန်းရဲ့ Function ၇၀% လောက်သုံးရတဲ့ Music Player ကိုး… တကယ်တော့ Music Player ထက်ပိုတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုလို့ပြောချင်ပါတယ်… ၂၀၀၀ ၀န်းကျင်က စီးပွားရေးသမားတွေစတိုင်ထုတ်ခဲ့တဲ့ Palm ထက်တောင်ပိုပြီးအလုပ်ဖြစ်သေးတယ်ကိုး…
အဲဒီမှာ လူငယ်သည်းခြေကြိုက် iPod Touch လေးတွေကြောင့် အခုနောက်ပိုင်း (၄)နှစ်ခန့်နောက်ကျပြီး… စက်ရုပ်ရဲ့ Music Player လေးတွေပေါ်တာတဲ့အကြောင်းလေးပြောချင်သကိုး…
အဲဒီမှာ စားသုံးသူရဲ့ ၀င်ငွေနဲ့ စက်ရုပ်တိုးတက်လာမှုကိုအခြေခံပြီးတော့ ဈေးကွက်အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စလို့ မြင်မိပါတယ်အစ်ကို… အဲဒီနေရာမှာ ဂီဂီပြောချင်နေတဲ့ အိုင်စီတို့ ချစ်တို့ရဲ့ ထုတ်လုပ်သူလေးတွေက ဦးမော့လာသကိုး…
အစ်ကိုပြောတဲ့ Decision Making ကတော့ အသက်ပဲဆိုတာကို အပြည့်အ၀ထောက်ခံကြောင်းပါ…
ဘယ်ဈေးကွက်ကို ဘယ်ပုံစံနဲ့ဖောက်မယ်ဆိုတာရယ်… စားသုံးသူကို ဘယ်လောက်အထိစိတ်ခံစားမှုအပြည့်အ၀ ပေးမယ်၊ ကိုယ့်ထုတ်ကုန်ကို တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းရယ်လို့ ခံစားရအောင်ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတဲ့ Creativity နဲ့ လမ်းကြောင်းရွေးချယ်မှုမှာတော့ Decision Making က မရှိမဖြစ်လို့ပြောဆိုရင်း အပြည့်အ၀ထောက်ခံသွားပါတယ်ဗျာ…
သည်ရက်ပိုင်း … သဂျီးတို့ အမေဒစ်ကင်န်မှာ ပန်းသီးနိုင် မုန့်လက်ဆောင်းရှုံးပြီး..
ခန်းကိုခုမှာ မုန့်လက်ဆောင်းနိုင် ပန်းသီးရှုံးတာ အစ်ကိုလည်း ဖတ်ရမပေါ့….
လျော်ကြေးတွေ ကွာခြားတာတော့ ထားပါတော့ …
ခေတ်တို့ စနစ်တို့ လူတို့ ဘာကြောင့်လဲတော့ မသိဘူး အစ်ကိုရေ…
ထိပ်ဆုံး အန်ထွာ ပရန်ညာ စားတယ် …. မိထူး ၀င်ရင် သူ နားကားတယ်…
အဲ ..မိထူး ကို သူက အင်နိုဗေးရှင်း နဲ့ ပြန်သတ်တယ်…
မိထူး ရဲ့ စပိ နဲ့ 
အင်နိုဗေးရှင်း ရဲ့ စပိ … အားပြိုင်ကြဇေသတည်းပေါ့ဗျာ…
လူတွေက ချန်ပီယံကိုပဲ သတိရသတဲ့ …
အနိုင်ရသူကိုပဲ ..သမိုင်းမှာ မှတ်ကျောက်တင်သတဲ့ …
ဟုတ်ကဲ့ အရှုံးသမား ကတော့ Bozo ဖြစ်ကြ ဇမြဲပါတဲ့ …
ဘာပြောရမှန်းတောင် မသိဘူးဗျာ …
ဟောသည့်ကျွန်းပေါ်မှာတော့ … ဘယ်သူ သာပြီး
ဘယ်သူ နာမယ် မသိသေးဘူး ..(ကျနော် မဖတ်မိတာလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်..)
အဲ့သည့်အခါကျရင် … အနှီ တဲန်းမတ်ဆု တွေကို ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားတဲ့
လိုင်းကန်ပနီ ဆြာသမား ၃ဦး … ဘယ်သူနာမယ် ဘယ်သူသာမယ် …
အော် … ဘ၀တွေ ပါ …
ဘယ်သူမှ ထိခိုက်တာ မလိုလားပါကြောင်း…
မနော့ပလီ .. ကစားချင်တဲ့ အဆင်မျိုးတွေ့ရင်တော့ …
ဆန့်ကျင်ချင်ပါကြောင်း….. ချဉ်ထှာ လို့ ..ရေးချင်မိပါကြောင်း…
သိတ်မသိသေးတဲ့ Marketing Strategyအကြောင်း
BC ပိုင်ရှင် ကိုဗစ်ထရီ ရဲ့ ကွန်းမန့်လေးကိုလည်း
ထုံးစံအတိုင်း မပါမဖြစ် လက်မလေး တစ်ချောင်းကိုလည်း
အလုပ်မှာတစ်ချိန်လုံး တစ်ထွာတက်ဂျီဒွေလုပ်ရလွန်းလို့ စိတ်ရှုပ်လို့ရွာထဲလာပါဒယ် …
ပိုစ့်ကိုရော ကွန်မင့်တွေကိုရော အားစိုက်ပြီး ထပ်ဖတ်ပါဦးမယ်..။